Fahasamihafana eo amin'ny drafitry ny hetsika sy ny tetika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny drafitry ny hetsika sy ny tetika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Business / Management / General Management / Difference Teo anelanelan'ny Action Plan sy Strategy
16 aprily 2011 Narotsak'i Olivia
Drafitra hetsika sy paikady
Raha manana vina hahatratrarana tanjona ianao nefa tsy mametraka azy io amin'ny fanemorana ny drafitra amin'ny fotoana rehetra, dia mieritreritra eritreritra manonofinofy ianao fa afaka hahatratra izany fa tsy manao na inona na inona ahatongavana. Mifanohitra amin'izany no izy, misy maro izay vonona hatrany amin'ny hetsika nefa tsy mahita fahitana. Mandany fotsiny ny fotoanany izy ireo ary ny tsy fahampian'ny drafitra dia tsy hitondra azy ireo na aiza na aiza. Eto no ahafantarana ny maha-zava-dehibe ny paikady sy ny drafitra asa. Betsaka ny olona no mihevitra ireo teny roa ireo ho fitovizan'ny teny fa mazava fa mifampiarahaba izy ireo ary raha tsy misy ny iray na ny hafa dia tsy hahatratra ny tanjony mihitsy ny olona iray. Ity lahatsoratra ity dia hanasongadina ny fahasamihafana misy eo amin'ny paikady sy ny tetik'asa ary ny fomba fiasan'ny roa tonta mba hanakaikezan'ny olona iray ny tanjony.
Eritrereto ny ekipa baolina kitra iray manomana ny paikadiny manohitra ny mpanohitra rehefa lalao eo amin'ny roa tonta no hatao ary. Ny paikady dia mazava ho azy fa atao ao an-tsaina foana ny tanjany sy ny fahalemeny ary koa ny an'ny mpanohitra. Fa ny lalao dia lalaovina amin'ny fotoana mety, izay mety tsy hahomby ny drafitra hetsika iray satria mety tsy araka ny kasaina azy ny zava-misy na ny hetsika. Amin'ny toe-javatra toy izany dia raisina ny drafitra B izay ampahany amin'ny paikady ankapobeny. Mazava avy eo fa ny drafitra hetsika dia ampahany amin'ny paikady ankapobeny izay mila ampiharina mba hahombiazan'ny paikady.
Ny paikady dia misy ny drafitr'asa ary mila mandika ny paikady ho hetsika amin'ny fampiasana ireo drafitra hetsika ireo. Ka tetikady no tanjona; ny drafitr'asa dia fomba iray hahatongavana amin'izany tanjona izany. Ny olona iray dia tsy afaka mankany amin'ny tanjony raha tsy mampihatra drafitra asa, ary ny mifanohitra amin'izay, raha tsy fantatry ny olona ny paikadiny dia ho lasa very maina ny asany rehetra.
Ny paikady dia atao ao amin'ny efitranon'ny birao amin'ny alàlan'ny fitantanana ambony ary ny drafitr'asa dia ampiharin'ny mpiasa amin'ny ambaratonga ifotony. Ny paikady foana no loha laharana ary ny drafitr'asa dia hatao avy eo. Ny tetika dia mety ho tsy maharitra fa ny drafitra asa kosa voafaritra tsara. Ny paikady no ampahany amin'ny saina ary ny drafitra asa dia ampahany ara-batana amin'ny fampiharana drafitra hahatratrarana ny tanjona. Tsy hoe ny paikady dia omby masina ary tsy azo ovaina manelanelana. Miankina amin'ny herin'ny tsena izy ireo ary azo ampifanarahina amin'ny drafitra hetsika. Eo no misy ny hevitra momba ny drafitra A, ny plan B ary ny plan C.
• Ny stratejika sy ny drafitra asa dia mifameno ary izy roa ireo dia tafiditra ao anatin'ny fanatratrarana tanjona
• Ny paikady dia namboarina ho toy ny drafitra ary ny drafitra asa no dingana tsikelikely amin'ny fomba fanaovana an'io drafitra io.
• Ny tetika dia ampahany ara-tsaina amin'ny fahazoana tanjona, ny drafitra asa no ampahany ara-batana amin'ny fanatratrarana tanjona.
Fahasamihafana eo amin'ny fahitana sy ny iraka Fahasamihafana eo amin'ny tanjona sy tanjona Fahasamihafana eo amin'ny soatoavina sy ny tanjona Fahasamihafana eo amin'ny manager sy ny Administrator Fahasamihafana eo amin'ny Project Manager sy ny Project Leader
Filed Under: General Management Tagged amin'ny: zavatra eritreretiko hatao , Tanjona , tetikady , Vision
Fahasamihafana eo amin'ny Retinol sy ny Retin A.
Fahasamihafana amin'ny carte de crédit azo antoka sy tsy azo antoka
Fahasamihafana eo amin'ny Sort Insertion sy ny Sort Selection
Fahasamihafana eo amin'ny photosynthesis Oxygenic sy Anoxygenic
Fahasamihafana eo amin'ny Monosaccharide sy Polysaccharide